We Fight We Win. -- " More than Media ": အစိုးရ အကြပ်အတည်းကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းပေးကြမလဲ
အစိုးရ အကြပ်အတည်းကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းပေးကြမလဲ
ဦးသိန်းစိန်မိန့် ခွန်းကို အနှစ်ချုပ်ရင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို လုပ်နေပါတယ်။
အခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ပူးပေါင်းပါ။ တည့်မတ်ပေးပါလို့ ဆိုတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ 
အနေနဲ့အစိုးရရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အကြပ်တည်းကို ဖြေရှင်း ဖို့ အတွက် အကြံပြုချင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြသာနာဟာ ဒီမိုကရေစီဆိတ်သုဉ်းမှုနဲ့ 
ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဒီမိုကရက်တစ် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီမိုကရက်တွေ ရှိဖို့ လိုတယ်။
ဒါကတော့ နိင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်မှာ အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရှိရေး လိုအပ်တယ်။ ပြည်ပ နိင်ငံသားတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက အင်အားစုတွေ ပူးပေါင်း နိင်ကာမှ အစိုးရအနေနဲ့ အထွေထွေအကြပ်တည်းက နေ တကယ်လွတ်မြောက် မယ်။ ယနေ့ ကြုံတွေနေရတဲ့ အထွေအထွေအကြပ်အတည်းကြီးကို အစိုးရတဖွဲ့ တည်း မလုပ်နိင်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရဖြစ်ရင်လည်းမလုပ်နိင်ပါ။
အစိုးရက အစိုးရအလုပ်ကိုလုပ် နေချိန်မှာ နိင်ငံရေးအင်အားစုတွေ က လူထု အကြပ်အတည်းကို တဖက်တလမ်းက ကူညီဖြေရှင်းပေးတာဟာ အစိုးရကို ကူညီတာပဲမဟုတ်ဘူး။ နိင်ငံတော်ကိုကူညီတာပဲမဟုတ်လား။
ထိုင်းနိင်ငံမဲဆောက် မြို့ မှာ အမိုက်ပုံး ၂ လုံး၇ှိတယ်။ တလုံးက အပြာရောင် ။ဒါ က မြူနီစပယ် ( အစိုးရ) က တာဝန်ယူပြီးအမိုက်ပြစ်ပေးတာ။ တလုံးက အ၀ါရောင် ။ ဒီအလုံးက လူမှု အသင်းအပင်းတခုက ကိုယ်စာရိတ်ကိုယ်စားပြီး သက်သက်
မြို့ ရဲ့ တာဝန်ကို လူမှု ၀န်ထမ်းစိတ်နဲ့ ကူညီဖြေရှင်းပေးတာပါ။ ဒါက အစိုးရကို ဆန်ကျင်နေတာမှမဟုတ်ပဲ။
ကျနော်ကို ခုနေ မြန်မာ ပြည်ပြန်ပြီး ဘာလုပ်မလဲ လို့ မေးရင်း မဲ ပုံ မထောင်ချင်ပါဘူး။ အမိုက်ပုံထောင်ပြီး အမိုက်တွေလိုက်သိမ်းပေး
ချင်ပါတယ်။ တကယ်လုပ်ပေးချင်တဲ့ဆနဒပါ။ အစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့။ မဲ လိုချင်လုို့ မဟုတ်ပါဘူး။
လူတွေကို အသိတရားပေးဖုို့ကလဲ တကယ်ကိုလိုအပ်နေတယ် ဆိုတာကျနော်မြင်မိတယ်။
ပြည်ပ အင်အားစု တွေကို ပြန်လည်ကူညီနိင်ရေးဟာ ဒီနေ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် မင်္ဂလာရှိတဲ့ခြေလှမ်းမဟုတ်ဘူးလား။
နိင်ငံတော်မှာ ဒီနေ့ ကြုံနေတဲ့ မဟာအကြပ်အတည်းက ပညာရှင်တွေမရှိတော့တဲ့ပြသနာပါ။
လုပ်ငန်းပေါင်းစုံမှာ ပညာရှင်တွေ လိုအပ်နေတယ်။ ဒါကို ပြည်ပ က မျိုးချစ်မြန်မာ တွေက
အနိမ့် ဆုံးပြောရရင် ဈေးထဲမှာ ရောင်းနေတဲ့ အမဲသားငါးတွေဟာ ဒီတိုင်း ဆိုင်ပေါ်ထားတင်ထားရုံ နဲ့၂ နာရီအတွင်းမှာ ပရိုးတင်းဓါတ်တွေကုန်သွားတယ်။ ဒီပရိုတင်းကို ဗက်တီးတီးယား တမျိုးက စားသုံးလိုက်တယ်။ အသားကတော့လတ်နေပါသေးတယ်။ အဟာရဖြစ်တဲ့ဓါတ်က မရှိတော့ဘူး ။ ဒီဗက်တီးတီးယားက ပရိုတိန်းတွေကို စားသုံးမှု မပြုနိင်အောင်အသားတွေကို စနစ်တကျ အအေးခန်းမှာ သိုမှီရပါတယ်။ အဟာရဖြစ်တဲ့ဓါတ်မရှိတဲ့အသားငါးတွေကိုကျနော်တို့မျိုးရိုးစဉ်အဆက်ဒီတိုင်းစားနေကြတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ တွေဟာ ပရိုတင်းအပြည့်အ၀မစားရတော့ပဲ ခနာကိုယ်က မထွားကြိုင်းပဲဖြစ်ကုန်တယ်။ သေးလှီလွန်းလာတယ်။ မွေးကင်းစကနေ ၅ နှစ်အတွင်း အဟာရပြည့်အောင်ပေးရပါတယ်။ ၅ နှစ်မှာ၇ှိတဲ့အရပ် က အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ၃ ဆရတယ်။ မြန်မာ ပြည်က ကလေးအများစုဟာ ၅ နှစ်မှာရှိတဲ့အရပ်က ၂ ပေအောက်ကို အလွန်ကျနေတယ်။ ဒါဟာ အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ ခနာကိုယ်သေးကွေးရင်
ဦးဏှောက်ဖွင့်ဖြိုးမှုလည်းနှေးသွားပါတယ်။ ဒီလို အစားသောက်တွေ၊ အဟာရတွေ နဲ ပတ်သက်လုို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်တွေ ဟာ ပြည်ပမှာရှိနေတယ်။
တခြားဘာသာရပ်တွေ မှာလည်း အထူးကျွမ်းကျင်တဲ ပညာရှင်တွေ အပြင်မှာပဲရှိတော့တယ်။
မြန်မာ့ စီးပွားရေး ပြန်လည် ဦးမော့စေဖို့အနည်းဆုံး စီးပွားရေး ပါရဂူ ကျွမ်းကျင်သူတွေ
အနည်းဆုံး ၁ရာခန့် လို အပ်နေပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်မှာမရှိတော့ပါ။
အခုရှိနေတဲ့သူတွေဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေပါ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ ဟာ ၀န်နဲ့ လုပ်အားမမျှမတ
ကျန်ရှိနေတဲ့ န်ိင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွတ်ပေးဖို့ ၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေရှိဖို့ ၊ တရားဥပဒေရှိဖို့ ၊ လူမှုရေးအသင်းအပင်းတွေလွတ်လပ်စွာ တည်ထောင်ခွင့်ပြုဖို့ တွေကို
ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုပေးဖို့ လိုနေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှု ခွင့်ပြုခြင်းဟာ အစိုးရကို
ခြိမ်းခြောက်တာမဟုတ်ပဲ ။ အစိုးရကို ပူးပေါင်းနေတာ ဖြစ်တယ်။ နိင်ငံတော်နဲ့ နိင်ငံသားတွေအတွက် ပျော်ရွင်မှု ကိုသာဖန်တီး ပေးလာမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်။
နောက်တခုက ပြည်တွင်းစစ်ပါ။ ပြည်တွင်းစစ်က အဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကတော့
ှုမသိကျိုးကြွံ ပြုမှုပါ။ ( Ignorance ) ၊ ဗမာ လူမျိုးအများစု က တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့
ခံစားမှုတွေကို မသိကျိုးကျွံ ပြုထားမှုဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေကို ပေးဖို့သူတို့ ခံစားချက်ကုိုကို်ယ်ချင်းစာ နာမှု ရှိဖို့ ပါပဲ။ ဗမာလူမျိုးတိုင်းက စစ်ဖြစ်နေလုို့ ကတော့မဖြစ်တော့ဘူး ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်မှာသာ တကယ် တောင့်တင်းတဲ့ နိင်ငံတော်( Strong State) ကိုတည်ဆောက်နိင်မယ်ဆိုတဲ့အသိရားရှိကြဖို့ ပါပဲ။
ပြည်တွင်းစစ် က အင်္ဂလိပ်က သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့သလိုလို၊ဦးနုကအမွေးပေးခဲ့သလိုလို၊ ဦးနေ၀င်းက လုပ်ကြံခဲ့သလိုလို တွေးခေါ်ကြ
စစ်ပွဲတွေကို အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းပြီး တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ဖို့ဦးသိန်းစိန် တင်ပြတဲ့ အဆင့်သုံးဆင့်ဟာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လက်တွေပြသဖုို့ လဲလိုတယ်။
ဒါကတော့ တိုင်းရင်းသားနယ်တွေမှာ တပ်စွဲနေတဲ့တပ်တွေကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ ပါပဲ။
တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပြည်နယ်တွေမှာ ဒေသဖွင်ဖြိုးရေးတွေကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်
KMT, Thein Sein said 'you are welcome to come back to Burma (with bare foot) only.
OPTIMISM, That I agree, HAIL.
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုမိုးသီးမဆိုးဘူး.. လိုက်လျောညီထွေ ပြီး သင့်တော်တဲ့အကြံဥာဏ်ပဲဗျာ..
Boy you talk too much, shut up. Go back to Burma and shout.